အကောင်းဆုံး Car Wheel Cleaner - အနားကွပ်ကိုမူလ Gloss သို့ပြန်ယူပါ။
ပင်မစာမျက်နှာ / ထုတ်ကုန်များ / အကောင်းဆုံးကားဘီး Cleaner
အကောင်းဆုံး Rim Cleaner လက်ကား
လျင်မြန်စွာအညစျအကွေးများနှင့်ကြေကွဲညစ်ပတ်ဖယ်ရှားပေး! မင်းရဲ့မော်တော်ယာဉ်ရဲ့ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကအညစ်ပတ်ဆုံးလဲ။ သင့်ဘီး! အပူချိန်၊ ရာသီဥတုဆိုးဝါးခြင်းနှင့်အမြဲတမ်းဘရိတ်ညစ်ညမ်းမှုများကြားတွင်သင်၏ဘီးများသည်ချက်ချင်းညစ်ပတ်နေသည်။ OPS Rim Cleaner သည်ဘရိတ်အမှုန့်များကိုပစ်မှတ်ထားပြီးဘီးများကိုအစက်မရှိသောနေရာတွင်အထူးကောင်းမွန်စွာဖော်စပ်ထားသောပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းသောအမှုန့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဘီးစုပ်စက်ကိုဆေးကြောပြီးသုတ်လိမ်းပါ။ ဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကျေနပ်အားရမှုတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပြီး Chrome Rim Cleaner သည်စျေးကွက်တွင်ကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
PS OPS ဘီးနှင့်တာယာသန့်ရှင်းရေး
ပလပ်စတစ်အိတ်သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ် box ထဲမှာထုပ်ပိုး♣ 500g အမှုန့်။
Rim သန့်စင်, OEM / လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှု, လက်ကား။
သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကား Rim Cleaner အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
သငျသညျဤမေးခွန်းများကိုအပေါငျးတို့သသိသလား ဒါဟာ non-သီးသန့်သန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်နှင့်အတူအောက်ဆိုဒ်နှင့်တက်တက်ကြွကြွစိတ်ပါဝင်စားမြေမှုန့်နှင့်ပြည့်စုံခေါင်းမာအစွန်းအထင်း, ရေနံဖုန်, သံမှုန့်, အဝါရောင်ဘီး, clean အချို့ခက်ပါတယ်။ ဘီးတစ်ဦးကိုအဆငျ့မွငျ့ set ကိုသာမန်သုံးမော်တော်ယာဉ်အသစ်ကပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ရုံအနည်းငယ်အချိန်နှင့် လက်ျာသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်ကိုသုံးပါ, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့နည်းလမ်းကို, ထို့နောက်သင်ပိုကောင်းအဆင့်ကိုဦးတည်သင့်ရဲ့ဘီးကိုယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဘရိတ်ဖုန်မှုန့်, သင်ဘရိတ်လျှောက်ထားအခါတိုင်းပွတ်တိုက်အားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တစ်စေးကပ်သောပစ္စည်းဥစ္စာ, အလွန်တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှည်လွန်းကားတစ်စီးဘီးအချက်အချာအပေါ် left လျှင်အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ဘီးရှင်းလင်းသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖွင့်မှန်မှန်အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။
ဘယ်လိုမှာ chrome ဘီးကိုချွတ်ဘရိတ်ဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေးမှ? အနည်းဆုံးတစ်ဦးလျှင်မြန်ဖျက်သိမ်းရှိခိုင်ခံ့သောပိုးမွှားလျော့ကျစေနိုင်စွမ်းနှင့်ဘီးမထိခိုက်သင့်ပါတယ်!
ကျနော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအသစ်သောထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းပညာ, အချို့သိပ္ပံနည်းကျပုဂ္ဂိုလ်များချီတက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အလွိုင်းဘီးသန့်စင် သိသိသာသာတိုတောင်းအစွမ်းထက်ပိုးမွှားလျော့ကျစေအချက်များ, လျင်မြန်စွာအရင်းအမြစ်မှာဖုန်များနှင့်အညစျအကွေးကိုထိုးဖောက်နိုင်သည့်အခမဲ့-အက်ဆစ်နှင့် pH ကိုကြားနေပုံသေနည်းများပါဝင်သည်နှင့်သင့်ဘီးသန့်ရှင်းရေးအချိန်စေသည်! အများစုမှာဘီးသန့်ရှင်းရေးသင့်ရဲ့ဘီး finish ကိုမှထိခိုက်ပျက်စီးနှင့်သင်ပယ်ရှင်းဖို့လိုထက်ပိုပြီးပျော်နိုင်! Ops အလွိုင်းဘီးသန့်ရှင်းရေးကိရိယာအစုံအစာရှောင်ခြင်းအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ခေါင်းမာသတ္တုညစ်ညမ်းမှုပျော်ဖို့ရ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ညာဘက်ပြုသောအမှု။ အဆိုပါအနားကွပ်, တာယာ blooming သန့်စင်ကအကောင်းဆုံးဘီးသန့်ရှင်းရေးဖော်မြူလာထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်, ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင့်သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ချင်တယ်။ ပျော်စေကားတစ်စီးဘီးခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ရန်မလိုပါ! ရုံရေနှင့်အတူကမွှေ, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ကားဘီးကသက်ဆိုင်ပါသည်။
♦ Rapid ဖျက်သိမ်းနှင့်ရေမြှုပ်ပေါများပါသည်။
♦နိုင်ပါတယ်အချက်တောက်ပင်, အပြည့်အဝဘီးအချက်အချာကာကွယ်ပေး, ဒီထုတ်ကုန်များ၏ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကို သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်ဘီးအသစ်သောအဖြစ်တောက်ပအဖြစ်လုပ်.
နူးညံ့သိမ်မွေ့♦အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမှာ chrome အနားကွပ်သန့်စင်, သင်၏လက်၌အဘို့မဆိုအန္တရာယ်မယူ။
status ကားအခြေအနေအလွန်ညစ်ပတ်နေလျှင်ပင်၎င်းသည် OPS လေးလံသောဘီးသန့်စင်စက်အတွက်ကိတ်မုန့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘီးအချက်အချာ၏မိုက်, lusterless နှင့်အခြားဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, မူရင်းတောက်ပြောင်ဖို့က restore ။
♦ ကို Maintenance
♦ quick ပိုးမွှားလျော့ကျစေ
1 ။ အဆိုပါစည်သို့ 2-3 ဇွန်းအမှုန့်လောင်းပါကပထမဦးဆုံးအမှုန့်လောင်း, ပြီးတော့ရေလောင်းရန်အကြံပြုသည်။
2 ။ အဆိုပါအချက်အချာကျော်ရေမြှုပ်ရေသွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ရေ scrubbing မတိုင်မီမိနစ်အနည်းငယ်များအတွက်သံမဏိလက်စွပ်ပေါ်မှာထိုင်ပါစေ
ထိုသို့သောရေမှိုတထွေးအဖြစ် tools များစသည်တို့ကိုနှင့်အတူဒါဟာသန့်စင်အိမ်လုပ်တာယာသန့်စင်ခြင်းနှင့် chrome အနားကွပ်မယ့်, ငါတို့သည်လည်းမှုန်ရေမွှားသန့်စင်ထားသော
carwash ဘူတာရုံသည်။ ဒါဟာအလုပ်လုပ်ဘို့ ပို. ပင်အဆင်ပြေပါ
3 ။ ရေကောင်းရေသန့်နှင့်အတူကဆေး။ (ဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက် High-ဖိအားအဝတ်လျှော်ခြင်းဖြင့်လက်မဆေး)
4 ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အထည်နှင့်အတူကသုတ်။
အင်ဂျင်ကနေအမဲဆီအပေါ် caked ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို?
ကျနော်တို့ကအဆင်သင့်အင်ဂျင်သန့်ရှင်းရေး Degreaser ကိုလည်းအနားကွပ်သန့်စင်ဖော်မြူလာကနေထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
သင် OPS ကားသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုဘယ်လိုထင်သလဲ ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်ထပ်အချက်အလက် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
မော်တော်ကားဘီး Cleaner အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်စာရွက်
Ops သံမဏိလက်စွပ် Self-သန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်
စျေးနှုန်း အမေရိကန် $ 2.20 / Bag (FOB Ningbo / ရှန်ဟိုင်း)
အဆိုပါရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလူ့ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ ကျေးဇူးပြု. သော့.